74-nak Chin Phunpi Ni Thusuah – CNO/CNDF - Falam Online Media
A Kum 74-nak Chin Phunpi Ni Thusuah – CNO/CNDF
Chin miphun pawl cu British pawl ih Chin rampi in laksak hlan tiang zoi’ kuthnuai hman ih um dah lo,azalenmi miphun kan rak si. Atui’ san ramdingkhawm Myanmar ram cangsuak thei dingih 1947 February 12 ah Kachin, Shan le Kawl miphun pawl thawn British kuthnuai ihsi suak thei dingin thuanthuroatlingmi Panglong Cakhen rak tuah tlangin Ramdingkhawm hramṭohtu miphun kan si.
1948 February 19 ihsin 22 tiang Chin khawlipi, Falam khuapi ih an rak tuahmi senpi tonkhawmnak ah hmunkip ihsinara suakkhawmmi Chin miphun mipum 5000 leng in Chinram hrang hmailam thusaupi ruatin le ramkhel thu hmuhnak sangzet an neihmi cu hrambun in an rak hman rero lai mi Lalhrin uknak cu Democracy uknak ah thleng dingin 1948 February 20, zinglam 11:00 ah lungrualten an rak nemhngetasi.
Acui’ February 20, Chin miphun lungrualnak suahnak dingah Chin Phunpi Ni tiih hmanarak sinak khal kum 74 roriakim zo. Kan lungrual zia langternak ah dawnkhamtu harsatnak tam zet um hman sehla ramsung lawng si loin, Chin miphun pawl umnak ramleng hmuntinkim khalah pumkhawm aw in Chin Phunpi Ni cu hlunghlai zetin kan hmang ringringasi.
Panglong Cakhen ih tiamkamnak an rak tuahmi mahte laireltheinak cu miphundang pawl thleidang zetih mi uktu ram hruaitu dangdang le ralhrang uknak hngetkhoh zetih in ukbet ringring ruangah ramhrin miphun hriamkaibu dang vekin, Chin miphun khalin sankhat hnu sankhat dothengnak an rak tuahasi. Mi ralṭha pawl; Pu Con Bik, Pu Khai Kan, Pu Vumtu Mawng, William Sa Lian Zam, Pu Son Kho Pau le Pu Hrang Nawl pawl in British sanlai ihsin ṭih nei lo le ralṭha zetin dothlengnak an rak tuahmi pawl cuatui’ ni kum 74-nak Chin Phunpi Ni ah hnglih loin upat sunlawihnak kan peasi.
Kan pupa pawl ih an sunmangasimi; zalennak, dingthluk lairelnak le rualrannak pawl hrambunmi Federal Democracy ramdingkhawm cangsuak ding le mahtei’ laireltheinak ngah thei dingin Chin miphun kan zaten mah le umnak hmun cio ah ralhrang ukbetnak cu theihtawp suahih do cio dingah Chin National Organization (CNO) cunakum 74-nak Chin Phunpi Ni ah kan forhfial awasi. Cuvek ṭhiamṭhiam in, ramhrin miphun zate ṭangrual ih ralhrang uknak cu nasa zet le hmual nei zetih do sinsin cio dingah Chin Phunpi Ni sawmnak thusuah kan tuahasi.
(၇၄) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်
ချင်းအမျိုးသားတို့သည် ဗြိတိသျှတို့ ချင်းပြည်ကြီးကို မသိမ်းပိုက်မီအချိန်အထိ အခြားလူမျိုးများ၏ လွှမ်းမိုး အုပ်ချုပ်မှုမခံရပဲ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကာ လွတ်လပ်သော လူမျိုးအဖြစ် ရပ်တည်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မျက်မှောက်ခေတ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံဖြစ်ပေါ်လာစေသော ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ဗမာလူမျိုးများနှင့်အတူ သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဗြိတိသျှတို့ လက်အောက်မှ ပြည်ထောင်စုကြီးကို အတူတကွ ထူထောင်ခဲ့ကြသော လူမျိုးဖြစ်သည်။
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ချင်းအမျိုးသားဦးရေ (၅၀၀၀) ကျော်သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉-၂၂) ရက် အတွင်း ချင်းမြို့တော် ဖလမ်းမြို့တွင် ကျင်းပသော လူထုညီလာခံ၌ စုရုံးကြကာ အနာဂတ်အမြော်အမြင်ရှိခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအသိမြင့်မားခြင်းတို့ကို အခြေခံလျက် ချင်းလူမျိုးနေထိုင်ရာဒေသအချို့တွင် ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည့် မြေရှင်ပဒေသ ရာဇ် အငွေ့အသက်ပါသော တိုက်သူကြီးစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအစားထိုးရန် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် တခဲနက် အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
ချင်းလူမျိုးများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးရှိစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ ဤဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်မှာ ယခုနှစ်ဆိုလျှင် (၇၄) နှစ်တိုင်တိုင် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ချင်းအမျိုးသားတို့ ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြယုဂ်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပေါ်လွင်စေသော သဏ္ဍာန်နှင့် တန်းတူရည်တူရှိမှုဟူသော အနှစ်သာရ တို့ကို အခြေခံပြီး အဟန့်အတား၊ အခက်အခဲများစွာကြားမှ ပြည်ထောင်စုအတွင်းသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ ချင်းတို့နေထိုင်ရာဒေသ အသီးသီး၌ စုစည်းကြကာ အောင်မြင်စွာနှင့် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလေ့ ရှိပါသည်။
လူမျိုးကြီးဝါဒကို ကျင့်သုံးသော ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှ ပင်လုံစာချုပ်တွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သော ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်များကို မျက်ကွယ်ပြုကာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့မှုများ ကြောင့် တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနည်းတူ ချင်းလူမျိုးတို့သည်လည်း ခေတ်အဆက် ဆက် တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ (၇၄) နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်သော ချင်းအမျိုးသားနေ့အခါသယမတွင် ဗြိတိသျှခေတ်မှ စတင်ကာ တော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲခဲ့ကြသော Pu Con Bik, Pu Khai Kam, Pu Vumthu Mawng, William Sa Lian Zam, Pu Son Kho Pau နှင့် Pu Hrang Nawl အစရှိသော ခေါင်းဆောင်များ၏ ရဲရင့်မှု၊ ပေးဆပ်မှု အစရှိသည်တို့ကို အောက်မေ့ သတိရကာ ဦးညွတ်အလေးပြုပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ချင်းဘိုးဘွားတို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ တန်းတူရည်တူရှိခြင်းကို အခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် ချင်းတမျိုးသားလုံး မိမိတို့ရှိရာ ဒေသအသီးသီးတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား တတ်စွမ်းသမျှ တွန်းလှန်ကြရန် (၇၄) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခါသယမတွင် မိမိတို့ ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (Chin National Organization) မှ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အခြားပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားများအားလည်း စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်အား ယခုထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် အတူတကွ တွန်းလှန်ကြပါရန် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်အဖြစ် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
← Salai Van Cung Lian ih “Chin Phunpi Ni” Thuanthu (Kawl Ca)
Ni3sung Phone lineasiat thei ruangah SAC ralhraang inamilai pawl Ralrin pe →
Falam Siizungpi ih Covid 19 mina zohkhentu damlo besia inaum